दुर्गा प्रसाईलाई कसले रोक्नसक्छ ?
काठमाडौं । बी एण्ड सीमा डाक्टर पढाइ हुन्छ भनेर प्रचार र तैयारी सुरु भएको छ । यद्यपि सम्बन्धन पाइसकेको छैन । दुई तिहाइको सरकारले जबरजस्ती मेडिकल विधेयक पारित गरेको र नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीलाई मार्सी चामलको भात खुवाएपछि दुर्गा प्रसाइको प्रभाव र पावर देखिएकै हो । उनलाई कसले छुने हिम्मत ? प्रसाई निके उत्साहित देखिन्छन् ।
४ महिनापछि मंसिर १ गतेदेखि एमवीवीएसको पढाइ हुन्छ भनेर बिबादित व्यक्ति दुर्गा प्रसाईले तैयारी थालेका हुन् । डा.रामप्रसाद उप्रतीलाई प्रिन्सिपल नियुक्त गरिएको छ । उप्रेती माओवादी निकट मानिन्छन् । प्रसाईले भनेका छन्– सम्बन्धन आउने प्रक्रियामा छ, आउँछ,
मंसिर १ गतेदेखि एमवीवीएस पढाई हुन्छ । अनुमति पाउने पक्का भएकाले तैयारी थालिएको हो ।
राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले राजधानी बाहिर पूर्वाधार पुगेकालाई सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ । त्यसमाथि एमाले र माओवादी एकीकरण गराउने समयमा घरमै मेजमानी खुवाएर प्रचण्ड र ओलीको वार्ता गराउन सफल मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाई पावर करिडरको हस्ती मानिन्छन् । अव उनलाई कसैले रोकेर रोकिएला र ? बी एण्ड सी १२ सय शैयाको अस्पताल हो ।
अनसन गरेर मेडिकल शिक्षा सुधार्न खोज्ने डा. गोविन्द केसीले पाँचथर अथवा ताप्लेजुङमा मेडिकल कलेज खोल्न सुझाव दिएका थिए । कम्युनिष्टहरुको स्कूल, कलेज, मेडिकल शिक्षामा व्यापक लगानी रहेको कारण नेकपा लगानीकर्ताहरुले नमा नेको खलासा पनि भएको छ । पहिले नै आशय पत्र पाएर बिबाद भएको बी एण्ड सीले सम्बन्ध कति दिनमा पाउला, धेरैको चासो बढेको छ ।